Hungary Allows Entry to Fully Vaccinated Russian Visitors | Airlines
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Airlines » Hungary waxay u ogolaatay gelitaanka booqdayaasha Ruushka ee si buuxda loo talaalay
Hungary waxay u ogolaatay gelitaanka booqdayaasha Ruushka ee si buuxda loo talaalay
Laga bilaabo July 27, 2020, dowladda Hungary waxay u oggolaan doontaa muwaadiniinta Ruushka ah ee haysta shahaadooyinka tallaalka COVID-19 inay soo galaan waddanka.
Dadka soo booqda Ruushka waxaa laga rabaa inay haystaan ​​fiisada Schengen oo sax ah iyo shahaadada tallaalka.
Tallaalka Ruushka ee loo yaqaan 'Sputnik V coronavirus tallaalka' ayaa laga diiwaangeliyey dalka Hungary.
Nidaamka bixinta Visa-ha lama beddelin.
Dalxiisayaasha ka socda Xiriirka Ruushka ee laga tallaalay COVID-19 waxay awood u yeelan doonaan inay si xor ah u soo galaan Hungary laga bilaabo maanta, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay safaaradda Hungary ee Moscow.
“Laga bilaabo July 27, 2020, dowladda Hungary waxay u oggolaan doontaa muwaadiniinta Ruushka ah ee haysta shahaadooyinka tallaalka COVID-19 inay soo galaan waddanka. Xaaladdan oo kale, muwaadiniinta Ruushku waxay awoodi doonaan inay soo galaan Hungary iyadoon wax xayiraad ah la saarin, iyada oo aan la helin karantiil qasab ah iyo baaritaannada PCR, haddii ay haystaan ​​fiiso Schengen oo sax ah iyo shahaadada tallaalka, ”ayaa lagu yiri bayaanka.
Sida laga soo xigtay safaarada, hanaanka bixinta fiisaha lama badalin. Si kastaba ha noqotee, waxaa loo baahan doonaa in lagu kabo arjiga oo leh shahaadada tallaalka.
Talaalka Ruushka ee Sputnik V COVID-19 ayaa laga diiwaan galiyay wadanka Hungary waxaana loo isticmaalaa qayb kamid ah ololaha talaalka qaranka.
Markii hore, si loo booqdo Hungary, muwaadiniinta Ruushku waxay ku khasbanaadeen inay bixiyaan laba baaritaan oo PCR-ga ah oo la sameeyay shan maalmood gudahood ka hor intaan la soo gelin iyaga oo leh farqi 48 saacadood ah, ama loo maro karantiil laba toddobaad ah.
Kuxigeenka Madaxweynaha Ururka Wadayaasha Dalxiiska ee Xiriirka Ruushka Dmitry Gorin oo faallo ka bixinaya sharciyada cusub ee soo gelitaanka Ruushka ee Hangari, wuxuu carrabka ku adkeeyay in furitaanka dalka uu noqon doono waxa loogu yeero "waddada cagaaran", taas oo keeni karta in xayiraadaha laga qaado dalalka kale.
Covid-19 Hungary Ruushka
Hudheel cusub ayaa laga furay wadnaha Jiinka Qorraxda ee LA